Da’yarkii hore ee Kooxda Chelsea,Tariq Lamptey oo jabiyay rikoor siddeed sano u yaallay Harry Kane – Gool FM
Da’yarkii hore ee Kooxda Chelsea,Tariq Lamptey oo jabiyay rikoor siddeed sano u yaallay Harry Kane
(Brighton) 24 Juun 2020. Difaaca dhallinyarada ah ee Tariq Lamptey ayaa kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League ah u saftay kooxda Brighton & Hove Albion, waxaana uu garaacay rikoor u yaallay weeraryahanka Tottenham Hotspur ee Harry Kane.
Da’yarkii hore ee Chelsea ayaa noqday xiddiga labaad ee ka yar 20-sano kaasoo horyaalka Ingiriiska u safta labo koox oo kala duwan hal xilli ciyaareed, waxaana rikoorkaas Kane uu heystay siddeed sano.
Kabtanka xulka qaranka England ayaa xilli ciyaareedkii 2012-13 u wada ciyaaray kooxaha Tottenham iyo Norwich, isagoo ahaa xiddigii ugun horreeyay ee dhallinyaro ah kaasoo hal xilli ciyaareed gudahiisa u safto labo naadi.
Lamptey ayaa suuqii January ku biiray kooxda Seagulls, isagoo qalinka ugu duugay heshiis saddex sano iyo bar ah kaddib markii ay Chelsea ku fasaxday qiimo aanan la shaacanin.
Xiddigan 19-jirka ah ayaa Blues u saftay kulankii Arsenal ee dhacay bishii Diseembar ee sanadkii tagay, waana kulanka kaliya ee uu kooxda Macallin Frank Lampard u saftay horyaalka Premier League.
Lamptey ayaa Brighton u saftay kulankii goolal la’aanta ku dhammaaday ee ay xalay la qaateen kooxda Leicester City.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester United iyo Sheffield United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay